शक्तिहिन नयाँ शक्तिको ओरालो यात्राः डा. बाबुराम अब कता ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने भनाई जस्तै भएको छ, देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनयुद्धकालिन माओवादीका एक लालयोद्धा डा. बाबुराम भट्टराईलाई । जनयुद्धका बेला उपनाम नै लालध्वज राखेका डा. बाबुरामले २ साल अघि लालक्रान्तिको ३ दशक लामो यात्रामा लगाएको पूर्णबिरामपछि बनाउन खोजेको नयाँ प्रजातान्त्रिक राजनीतिको बाटोमा उनी निरन्तर असफल हुदै आएका छन । उनको नयाँ शक्ति नामक नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दल नामले नयाँ, कामले हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भने जस्तै भएको प्रमाणित गरिदियो २ चरणमा सकिएको स्थानीय चुनावको ताजा परिणामले ।
पछिल्लो साता उनले अरु २ वटा राजनीतिक मार खाए । एक उनले आफैले भूकम्पले भत्किएर रातो स्टीकर लागेको घर भनी संज्ञा दिएको माओवादी केन्द्रले उनलाई पार्टी एकताका लागि निम्तो दियो । उनी नयाँ शक्ति निर्माणमा क्रमशः पराजित र थकित हुदै गएका बेला प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले उनलाई पार्टी एकताका लागि दिएको नयाँ प्रश्ताव उनका लागि राजनीतिक खिस्सी ट्यूरीको गज्जब मसला थियो । दोस्रो उनले वर्षदिन लगाएर टुंगोमा पुरयाउन लागेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसंगको पार्टी एकताको भगिरथ प्रयाश अन्ततः करायो करायो दक्षिणा नै हरायो भने जस्तै हुन गयो । त्यसमाथि उनकै युद्धकालदेखिका दाहिने हात तथा नयाँ शक्तिका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले बाबुरामको बिरामहरुको संश्लेषण गरे, नयाँ शक्तिको यात्रा सुरुदेखि नै उल्टो गतिमा । देवेन्द्र पौडेलहरुको असंतोष त दिनदिनै चुलिदै नै छ ।
माओवादीसंगको एकता असंभवः
यी दुुबै राजनीतिक रस्साकस्सी राजनीतिमा आफू ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भन्ने उखानको प्रतिरुप थियो डा. भट्टराईका लागि । किन भने कम्युनिष्ट राजनीति नै परित्याग गरेका उनलाई फेरि प्रचण्डले पार्टी एकताका लागि दिएको प्रश्ताव उनीमाथिको कटु व्यंग्य थियो । अर्कोतिर आफैले चाहेको संघीय समाजवादीसंगको एकता प्रयाशको विफलता चाहि अर्को कठोर राजनीतिक वज्रपात ।त्यसैले त नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संस्थापक तथा संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकताबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुनै सम्वाद नभएको मात्रै बताएन्न, एकताको संभावनालाई पनि पूर्णत खारेज गरिदिए । डा. बाबुरामका भनाईमा माओवादीसँग तत्काल पार्टी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको मात्रै होईन, प्रचण्ड प्रशताव नै हास्याष्पद हो, केवल प्रचण्ड सपना मात्रै हो ।
पार्टीको अघिल्ला २ दिनमा राजधानीमा सम्पन्न संघीय परिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डले के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । उहाँले सपना देखेको पनि हुनसक्छ । तर, पार्टी एकताबारे मेरो कुनै कुरा भएको छैन ।’पूर्व माओवादी नेता समेत रहेका उनले अघि भने, ‘तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना पनि छैन ।’डा. बाबुरामको यो कठोर प्रतिक्रियाले माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बिस्तारीत बैठक मार्फत डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पार्टी एकतामा आउन भन्दै गरेको प्रचण्ड आह्वानको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । किन भने नयाँ शक्ति मात्रै होईन, वैद्य र विप्लवले पनि प्रचण्डको एकता प्रश्तावलाई हरुवा गोरुको छेरुवा दाउमा सीमित गर्दै कडा आपत्ति जनाईसकेका छन ।
शास छउन्जेल आशः फोरमसँग चुनावी तालमेल
डा. बाबुराम र उपेन्द्र यादव जति नै राष्टवादी र जनवादी देखिए पनि यी दुुबै पात्र दक्षिणी छिमेकका असली नेपाली राजनीतिक पात्र मानिन्छन । खासगरी जवाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका पिएचडी डा. बाबुरामलाई त दक्षिणका दाहिने हात नै मानिन्छ । त्यसैले दक्षिणकै इशारा र प्रयाशमा नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादीको एकता हुन लागेको राजनीतिक पण्डितहरुको आँकलन थियो । तर छिमकेको सदिच्छा भन्दा डा. बाबुराम र उपेन्द्रको उम्लिदो राजनीतिक महत्वाकाँक्षा नै पार्टी एकता अभियानका दौरान हावी भयो । फलतः एकता प्रयाश तुहियो ।
स्थानीय चुनावदेखि नै चुनावी तालमेल गरेका र त्यस अघिदेखि नै एकै मोर्चामा रहेर राजनीतिक लाईनमा सहकर्मी, सहधर्मी बनेका यी दुुई दलको एकता भाडिए पनि डा. बाबुरामलाई डुुब्दो नाऊको सिन्को साहारा भने जस्तै अझै उपेन्द्रको साहारा चाहिएको देखाए । डा. भट्टराईले संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकता प्रयास असफल भएको स्वीकार गरेपनि सहकार्यमा निरन्तरता हुने जनाएका छन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादलाई सिद्धान्त बनाउनु पर्ने अडान राखेर फोरमले परम्परावादी राजनीतिमा जोड दिएका कारण एकता टुुटेको बखान गर्ने डा. बाबुरामले शास छउन्जेल आश भने जसरी असोज २ को २ नम्वर प्रदेशको स्थानीय चुनाव भने संघीय समाजवादीकै मशाल बालेर लडने दाऊ राखीरहेको समेत खुलस्त पारे ।
संघीय समाजवादीसंग टुुटेको एकताबारे ‘केही वैचारिक राजनीतिक कुरा हो । पार्टीको नाम र संंगठनात्मक संरचनामा पनि सहमति हुन सकेन । एकता प्रयास अहिलेलाई अन्त्य भयो ।’ भनेका डा. बाबुराम फेरि पार्टी एकता नभए पनि प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय चुनावमा तालमेलको प्रयास हुने चाहि सगर्व बताईरहेका छन । यसको मत्लव दक्षिणी दीक्षामा फेरि पनि एकताका लागि अरु उपाय खोज्न यो चुनावी तालमेलको झिनो खेला बाँकी राखिएको पनि हुन सक्छ । किन भने यस अघिका स्थानीय चनावमा नयाँ शक्ति बडाहरुमा सीमित हुदा संघीय फोरम ८ स्थानीय तहमा जितेर ५ औं दलबनेको छ । उसले २ नम्वर प्रदेशमा जीत संख्या बढाउने निश्चित छ । त्यही आशले हुनसक्छ उपेन्द्रकै मशालको उज्यालो र धोतीको फेर समात्न अझै डा. बाबुराम फेरि तम्सिएका देखिन्छन ।
ओराली लागेको हरिणको चालः
तत्कालिन एकिकृत माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर दुई चरणको स्थानीय तहमा निराशाजनक नतिजा प्राप्त गरेको दलका संयोजक बाबुराम भट्टराई राजनीतिक रुपमा स्खलित, अप्रासाँगिक र जनमतमा क्रमशः अस्वीकृत हुदै गएको त स्थानीय चुनावी परिणामले नै प्रमाणित गरयो । अझ फोरमसंगको एकता प्रयाशको बिफलता त उनको राजनीतिक ओरालो यात्राको अर्को मानक विम्व हो ।काँग्रेस, एमाले र माओवादी तथा केही हदसम्म मधेशवादी लगायत अन्य संसदमा प्रतिनिधितव गर्ने दलहरुको विकल्पमा नयाँ शक्तिको नारा र प्रयाश थालेका पूर्व पत्रकार रवीन्द्र मिश्र, र विवेकशील नेपाली दलका उज्ज्वल थापाहरुलाई हेरेको र्हेयै बनाएर बाबुरामले नयाँ शक्ति नामको पार्टी नै बनाएका थिए आफ्नै नेतृत्वमा । तर नयाँ शक्तिकै प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाका शव्दमा नयाँ शक्तिको गठनदेखि अहिलेसम्मकै यात्रा उल्टो बाटोमा भयो । हाल रवीन्द्र मिश्र र उज्ज्वल थापाहरुले साझा पार्टी र विवेकशील पार्टी एकीकरण गरिसक्दा डा. बाबुराम भने ओराली लागेको हरिणको चालमा सीमित छन । वास्तवमा नै नाममा मात्रै नयाँ तर पुरानै अनि नाममा शक्ति तर शक्तिविहीन बन्न पुगेको छ नयाँ शक्ति पार्टी।
प्रवक्ता देवकोटाको राजीनामाः नेता पौडेलको असंतुुष्टीः
जहाँ पातलो त्यही छिटो भ्वांग भन्या जस्तै छ नयाँ शक्ति भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष पनि । एकातिर नेता देवेन्द्र पौडेलहरुको समुह अब माओवादी केन्द्र जस्तै विचार मिल्नेसंग एकता गर्न दबाब बढाइरहेका छन, संयोजक बाबुराममाथि । उता नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता तथा सञ्चार विभाग प्रमुख खिमलाल देवकोटाले पदबाट राजीनामादिएका छन्। भन्नलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले हार ब्यहोरेकोमा जिम्मेवारी लिँदै उनले पदबाट राजीनामादिएको दाबी गरे पनि यो पार्टी खिया पर्दै गएपछिको आन्तरिक छटपटीको अर्को शालिन विद्रोहका रुपमा प्रकट भएको छ । गएको साउन १० गते पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई पदीय जिम्मेवारी त्याग गरेको जानकारी गराएका खिमलालले पार्टीले भोगेको पराजयप्रति जिम्मेवारी कोही न कोहीले त लिनुपर्ने भन्दै आफूले राजीनामादिएको बताएर पार्टी पराजयको नैतिक जिम्मा संयोजक डा. बाबुरामले नलिएर पदलोलुपता देखाएको आरोप स्पष्टै लगाएका छन ।
प्रवक्ता देवकोटाले बुझाएको ६ बुँदे पत्रको चौथो बुँदामा यसबारे उल्लेख गरेका छन्। ’२०७० सालको निर्वाचनमा आफु संलग्न रहेको पार्टी पहिलोवाट तेश्रोमा झर्दा नैतिकका आधारमा अध्यक्षले राजीनामादिनुपर्छ भनियो । निकै जोड गरियो नयाँ शक्तिको खाँचो यसकारण पनि छ भनेर त्यसैलाई पनि कारण बनाइयो’ उनले लेखेका छन् ’तर आज आफूलाई पर्दा ती प्रसंगवश पनि देखा परेनन्। त्यसैले कहिँ न कहिँ समस्या छ। यस्तो लागेर कसै न कसैले जिम्मा लिन पर्छ भन्ने महसुस भइ मैले नैतिक जिम्मेवारी लिदै पार्टी प्रवक्ता, सञ्चार विभाग प्रमुख र कार्यकारी समितिको पद परित्याग गर्ने निश्कर्षमा पुगेको व्यहोरा यस अघि अनौपचारिक छलफलमा व्यक्त गरेकै थिए। सोही कुरालाई अहिले औपचारिक रुपमा यो जिम्मेवारी परित्यागको पत्र प्रेषित गरेको छु।’ यसमा प्रवक्ता देवकोटाले संयोजक डा. बाबुराम प्रचण्ड जस्तै देखिएको स्पष्टै बताएका छन । किन भने प्रचण्डले दोस्रो संविधान सभा चुनावमा माओवादी पहिलोबाट तेस्रो दलमा खुम्चिदा पनि राजीनामा गरेका थिएन्न । विचरा बाबुरामलाई यो उनकै सहयोगीको ठूलो नैतिक झापड पनि हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमा सहभागी भएका देवकोटाले पार्टी गठन भएदेखि नै उल्टो बाटोमा हिँडेको बताएर आफ्नै संयोजकको पनि राम्रै खिल्ली उडाएका छन । ’रंगशालाको लाखौको जमातबाट कमलादीमा केही हजार लिएर पुग्यो। त्यहाँबाट पनि बबरमहलमा केही सय मान्छे लिएर आयौं। बबररमहलबाट पनि तिन सहसंयोजक लिएर संयोजकज्यू पार्टी कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नुभो’ देवकोटाले लेखेका छन् ’त्यस पछिको लगभग असी प्रतिशत समय परिषद सदस्य थप्ने कार्यसमिति सदस्य थप्ने र वढुवा गर्ने ध्यानमा नै प्राय वैठकहरु सकिन थाले। पटक पटक मैले असहमति राख्दै आए तर सुनुवाई भएन। पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिको हेक्कासम्म पनि हुन छाडयो।’ देवकोटाले पदीय जिम्मेवारी त्यागे पनि वैकल्पिक राजनीतिको अभियानमा आफू अग्रपंक्तिमा रहेर योगदान गर्ने बताउदै आफ्नै संयोजक डा. बाबुरामलाई झापड मारे । हुन पनि हो हजारौका वीचबाट उदाएको नयाँ शक्ति अहिले औलामा गन्नेहरुको झुण्डमा सीमित हुदै गएको त दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग तथ्य नै हो ।
यी तमाम दुखका बातहरुका माझ कर्मकाण्डी शैलीको संघीय परिषद वैठक सम्पन्न गरेर नयाँ शक्तिले आफूमाथिका घात, पराजय र प्रहारको बचाउ भने गर्न खाजेको छ । उसका पछिल्ला निर्णयहरु पढ्नैका लागि चाहि रोचक छन, भलै ती यथार्थ भन्दा मीठा शव्दहरुको संयोजनमा मात्रै किन सीमित नरहून । पढौं नयाँ शक्तिका नयाँ निर्णयहरुः
नयाँ शक्ति संघीय परिषदका निर्णयहरु जस्ताको त्यस्तैः
१. केन्द्रीय कार्यकारी समिति तथा संघीय परिषद बैठकमा पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ‘पार्टी स्थापनाको एक वर्षस् समीक्षा र आगामी कार्ययोजना’ नामक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । प्रतिवेदनउपर केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकमा ७२ जना र संघीय परिषद बैठकमा ९२ जना गरी जम्मा १६४ जना सहभागीहरुले सुझाव, प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुभयो । प्राप्त सुझावहरुहरुलाई प्रतिवेदन पुनर्लेखन समितिमा पठाउने र जायज सुझावहरुलाई समावेश गर्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरियो ।
३. संघीय परिषदले केन्द्रीय कार्यकारी समिति विघटन गरेको छ । प्रथम महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने अधिकार निर्धा्रित मापदण्डका आधारमा पार्टी संयोजकलाई दिएको छ । महाधिवेशन आगामी प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनपछि उपयुक्त समयमा आयोजना गरिनेछ । संघीय परिषदमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजकका लागि डा. बाबुराम भट्टराईको नाम परशुराम खापुङले प्रस्ताव गर्नुभयो । सर्वसम्मतीबाट डा. बाबुराम भट्टराई पार्टीको संयोजक निर्वा्चित हुनुभएको छ ।
४.संघीय परिषद् बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय महत्वका विभिन्न १३ वटा समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । प्रस्तावहरुको पूर्णपाठ यसै वक्तव्यका साथ समावेश गरिएको छ ।
५.संघीय परिषदको तेस्रो पूर्ण बैठक भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस बैठकको आयोजना, सञ्चालन र समापन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्थाप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरियो ।